Hakone, တိုကျိုမှလေ့လာရေးခရီး | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | အကြံပေးချက်များ, Tokio
၏သင်္ကေတတစ်ခုမှာ ဂျပန် ဒါဟာဖူဂျီတောင်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့မင်းကအရမ်းမြင့်တဲ့အဆောက်အအုံထဲမ ၀ င်ခင်ကောင်းကင်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရင်တိုကျိုကသိပ်မကောင်းဘူး။ ၎င်းကိုနားလည်ရန်အခြားတောင်များ၊ သစ်တောများနှင့်လှပသောရေကန်များနှင့်အတူသင်မြို့မှထွက်ခွာရမည်။
Hakone သည်လူကြိုက်အများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် နှင့်ဂျပန်ရေကန်ကြုံနေရမှကြွလာသောအခါအကြံပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည်တိုကျိုနှင့်အလွန်နီးသောကြောင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်အလွန်ထိရောက်သောကြောင့်လွယ်ကူမြန်ဆန်သည်။ ထိုအချိန်ဇယားအပေါ်! ကြည့်ရအောင် ဟက္ကုန်းမှာဘာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်။
1 Hakone ဘယ်လိုသွားရမလဲ
သင်ဟာကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသင်ဝယ်ယူခဲ့မယ်ဆိုရင် ဂျပန်ရထား Pass ကို သင်၏တိုင်းပြည်တွင် JR လိုင်းများကိုသုံးနိုင်သည်၊ ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်ချိန်မှာသင်ဟာသီးသန့်လိုင်းတစ်ခုကိုသွားပြီးခြားနားချက်ကိုပေးရမယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ယင်းသည်များသောအားဖြင့် JR သည်အလွန်ရှည်သော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံသင်ကသီးသန့်လိုင်းတစ်ခုသို့သွားရသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, မအမြဲ။
JR နှင့်အတူ သငျသညျ Odawara ရ ပြီးတော့အဲဒီကနေသင်ရထားတွေဒါမှမဟုတ်ဘတ်စကားတွေကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ နာရီဝက်ပဲတိုကျိုကနေဒါမှမဟုတ် Shinagawa ဘူတာမှ shinkansen ကိုရောက်ပါတယ်။ ၎င်းသည် Kodama ရထားများဖြစ်သင့်ပြီး Hikari အချို့သည်လက်မှတ်ကြိုတင်လက်မှတ်ဝယ်ယူရန်ချဉ်းကပ်သည့်အခါရုံးခန်း၌မေးမြန်းပါ (Odawara ရှိ Hikari ရပ်နားမည်မဟုတ်) နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ JR Tokaido လိုင်းသို့မဟုတ် JR Shonan Shinjuku လိုင်းနှင့်ဆိုင်သောတိုကျိုမြို့တွင်ဒေသတွင်း (သို့) အဝေးပြေးရထားဖြင့်သွားရန်ဖြစ်သည်။ အရာအားလုံးကို JRP ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။
မြူနီစီပယ်သည်ကျယ်ပြန့်သည်။ တောင်တန်းများစွာရှိပြီးအချို့မှာရေကန်များသို့မဟုတ်ချိုင့်ဝှမ်းတွင်တည်ရှိသည်။ areaရိယာတစ်ခုလုံး ၎င်းကိုရထားများ၊ ဘတ်စ်ကားများ၊ ကေဘယ်လ်များ၊ funiculars များနှင့်လှေများကောင်းမွန်သောကွန်ယက်တစ်ခုဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဒါဟာအစကွဲပြားခြားနားပေးထားပါတယ် ခရီးသွား passes ည့် ကွဲပြားခြားနားသောစျေးနှုန်းများနှင့်အတူ။ အမည်:
ဖူဂျီ Hakone Pass ကိုFuji Five Lakes ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အကျုံး ၀ င်သည်။ သုံးရက်ဖြစ်ပြီးတိုကျိုမှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ယန်း ၅၆၅၀၊ ဒေါ်လာ ၅၀ ကုန်ကျတယ်။
Hakone အခမဲ့ Pass: ၂ ရက်သို့မဟုတ်သုံးရက်အတွင်းတွင်ထိုဒေသရှိ Odakyu ရထားများ၊ ဘတ်စ်ကားများ၊ နောက်ပြီးတိုကျိုကိုသွားမယ်၊ ယန်း ၄၀၀၀၊ ယူရို ၄၀ လောက်ကုန်ကျတယ်။
Hakone Kamakura Pass: ၎င်းသည်အကုန်အကျအများဆုံးသောခရီးဖြစ်သည်။ သုံးရက်ကြာအကန့်အသတ်မရှိသုံးရထားလမ်းကို Odakyu ကွန်ယက်တွင်အသုံးပြုသည်။ Hakone အတွင်းနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ကကကူရာကိုသွားနိုင်သည်။ ယန်း ၆၅၀၀ ကုန်ကျသည်
Hakone တိုကျိုမှကီလိုမီတာ ၁၀၀ အောက်သာရှိသည် နှင့်ပျော်မွေ့ရန်နေရာကောင်းတစ်ခု ရေပူစမ်းကြည့်ပါ ဂွဂို နှင့်မျှော်လင့် ဖူဂျန်။ Onsen အပန်းဖြေစခန်းများသည်လူကြိုက်များပြီးပျော်စရာကောင်းသောနည်းလမ်းမှာရိုးရာဂျပန်ရိုးရာရီယိုကန်၌အိပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အားလုံးစျေးနှုန်းများရှိပါတယ်နှင့်ငါအတွေ့အကြုံကကျိုးနပ်ကြောင်းကိုသင်တို့အားငါအာမခံသည်။
ထို့နောက် Odawara အနီးရှိ Yumoto ကဲ့သို့သောအပူသင့်တင့်သောမြို့များသည်အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်တောင်တန်းများတွင်ဝှက်ထားသောရိုင်ယန်လူမျိုးများနှင့်အခြားသူများမှာအာရှီကမ်းခြေတွင်ရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သာရိုင်ကန်းတွင်မနေပါကခရီးသွားများအတွက်ဖွင့်ထားသောယန်း ၅၀၀ မှ ၂၀၀၀ ကြားတွင်အများပြည်သူသုံးရေပူရေအေးတစ်ချောင်းကိုသင်ရနိုင်သည်။ ဤရိုကီနန်တို့၏အမည်များကိုတင်ဇန်န်း၊ Hakone Kamon၊ Yunosato Okada၊ Hakone Yuryo သို့မဟုတ် Kappa Tengoku
ဂျပန်သည်မီးတောင်တိုင်းပြည်ဖြစ်ပြီးပထဝီဝင်အနေအထားကိုထူးခြားသောသမိုင်းကြောင်းဖြင့်မှတ်သားထားသည်။ Hakone မှာအဲဒီလိုမြင်စရာတွေအများကြီးရှိတယ် အရာအားလုံးကိုလုပ်ရန်ကြည့်ရှုရန်ရွေးချယ်နိုင်ပြီး၊ သေးငယ်သော circuit တစ်ခုသို့သာသင်ကိုယ်တိုင်ကန့်သတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်လုပ်ချင်သောအရာနှင့်သင့်အချိန်ပေါ်မူတည်သည်။
အတွက် တိုတောင်းသောဆားကစ် Odawara သို့မဟုတ် Hakone-Yumoto ရှိရထားပေါ်မှဆင်းပြီး Gora တွင်မိနစ် ၅၀ ခရီးအပြီးတွင် Tozan ရထားသို့သွားပါ။ ဤတွင်သင်သည်နောက်ဆုံးဘူတာသို့ funicular ကိုယူ။ , cableway ကိုပြောင်းလဲနှင့် Ashinoko ရေကန်၏ကမ်းခြေပေါ်တက်အဆုံးသတ်ရလိမ့်မည်။ သင်ဟာအိုင်ကိုလှေနဲ့ဖြတ်ကူးပြီး Hakone-Machi (သို့) Moto-Hakone ကိုသွားပြီးဘတ်စ်ကားစီး။ သင်၏စမှတ်သို့ပြန်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆားကစ် သုံးနာရီကျော်မကြာပါဘူး
ပြီးနောက် ရှည်လျားပြီးပြည့်စုံသောတိုက်နယ်? သင်ရထားမှ Odawara သို့မဟုတ် Hakone-Yumoto မှဆင်းနိုင်သည်။ ပထမဆုံးဘူတာရုံမှထွက်ခွာလျှင် ၁၀ မိနစ်သာဝေးသောတောင်ကုန်းပေါ်ရှိအိုဒိုရာရဲတိုက်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ သင်တစ် ဦး မယူလျှင် စပျစ်သီးရထား, တိုဇန်း, သေးငယ်တဲ့ပေမယ့်လှပသော Hakone-Yumoto ဘူတာရုံမှ။ အင်္ဂလိပ်စကားပြော ၀ န်ထမ်းများဖြင့်ခရီးသွားရုံးတစ်ခုရှိပြီးသင့်အားမြေပုံနှင့်လက်ကမ်းစာစောင်များ ပေး၍ ဤနေရာတွင်သင်ကြည့်နိုင်သည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့မှာအပူရေချိုးအိမ်တွေရှိပြီးသင်တစ်နေ့တည်းနေနိုင်သည်။ သင်ရထားပေါ်ပြန်မသွားပါကကျန်ရှိသောလမ်းကြောင်းသည်လှသောကြောင့်တောင်ကိုတက်ပါ။ သင်ရ Miyanoshita ဘူတာအများအပြား Onsen အတူ။ ဒီနေရာမှာ ၁၉ ရာစုကဟိုတယ်ဟောင်းတစ်ခန်း၊ သင်စားသောက်နိုင်၊ စားနိုင်သည့်နေရာ။ နှစ်ခုဘူတာအကြာတွင်အတွက် Chokokuno-Moriသင့်အနေဖြင့်ခေတ်မီပန်းပုနှင့် ပတ်သက်၍ လှပသော Hakone နှင့် Hakone Open Air ပြတိုက်၏လှပသောရှုခင်းများရှိသည်။
၁၀ မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်ရတယ် Gora, Tozan အပူနွေ ဦး ။ ဤတွင်သင်သည်တောင်စောင်းသို့တက်သောသောတွန်းလှည်းပေါ်တွင်ရောက်သည်။ ရပ်တန့်ခြင်းတစ်ခုစီ၌၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရှိသော်လည်းခရီးသည်အဆုံးသတ်သည် Souzan ဘယ်မှာယူတာလဲ Hakone ကေဘယ်လ် အဲ့ဒါကငါးကီလိုမီတာအကွာအဝေးမှာမင်းကိုတိုက်ရိုက်သွားစေတယ်။ သင်တစ်ဝက်လောက်ရှိတယ် Owakudaniလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းသုံးထောင်ကပေါက်ကွဲခဲ့သောယနေ့တွင်ဆာလ်ဖာဖာမာရီရော့များ၊ ရာသီဥတုကောင်းမွန်ပြီးဖူဂျီတောင်ကိုတောင်တွေ့နိုင်သည်။
မီးတောင်၌တိုက်ရိုက်ချက်ပြုတ်ထားသောကြက်ဥများကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်ပြီး၎င်းတို့သည်အလွန်အနက်ရောင်ဖြစ်သည်။ တီဗွီမှာမင်းမြင်ဖူးလား။ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်စျေးဆိုင်များရှိပါသည်။ အကယ်၍ သင်ဟာစွန့်စားမှုပိုများပြီးအဆင်ပြေသောဖိနပ်များကိုယူဆောင်လာပါကသင်အနေနှင့် Kamiyama တောင်နှင့် Komagatake တောင်ထိပ်သို့ဆက်လက်လမ်းလျှောက်နိုင်သည်။ ဒီနေရာတွင်သင်အသုဘထပ်ယူပြီး Ashinoko ရေကန်သို့ဆင်းသွားသည်။ နှစ်နာရီကြာ လေတိုက်၍ တစ်ခါတစ်ရံမိုးရွာစေသောလမ်းလျှောက်ပါ။
သင်ဤမျှလောက်လမ်းမလျှောက်ချင်ပါကအလယ်အလတ်လမ်းကြောင်းရှိသည်။ သင်သည်နာရီဝက်ခန့် Kamiyama တောင်သို့လမ်းလျှောက်ပြီးနောက် Ashinoko ရေကန်သို့ဆင်းသွားသည်။ Owakudani နှင့်ဆက်သွယ်သော Hakone ကားလမ်းသည်သိပ်မဝေးပါ။ ငါးနာရီလေ့လာရေးခရီးသွားခွင့်ပြုပါ။ Owakudani သည် Souzan နှင့် Togendai ကိုဆက်သွယ်ပေးသော Hakone funicular ၏ဘူတာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် Ashinoko ရေကန်ပေါ်တွင်လှေဂန္ထ ၀ င်ဖူဂျီဆန်ပို့စကတ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောကယ်လ်ဒါရာအိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ကမ်းခြေရှိကျေးရွာများ၊ အလွန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောအရာမရှိ၊ အပန်းဖြေစခန်းအချို့ရှိသည်။ အပျော်စီးသင်္ဘောကုမ္ပဏီနှစ်ခုရှိပြီးခရီးစဉ်သည်နာရီဝက်ထက်မပိုသောကြောင့်ယန်း ၁၀၀၀ ခန့်ကုန်ကျသည်။ သင်္ဘောတစ်စင်းပင်ပင်လယ်ဓားပြသင်္ဘောတစ်စင်းနှင့်မစ္စစ္စပီလှိုင်းသင်္ဘောတစ်စီးဖြစ်သည်။ အမှန်တရားကတော့၊ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှရှည်လျားတဲ့ဆားကစ်ကိုပိုပြီးအကြံပေးလိုပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းက Hakone အတွက်သင့်မှာရှိတာအားလုံးနီးပါးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။
ထိုကွောငျ့, ကျနော့်အကြံပေးချက်ကမင်းက ၂ ရက်၊။ သငျသညျထိုဒေသတွင်နေထိုင်, သင်လမ်းလျှောက်, အနားယူ, ညမှာထွက်ပြီးတော့တိုကျိုကိုပြန်သွားပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » မြို့ကြီးများ » Tokio » Hakone၊ တိုကျိုမှလေ့လာရေးခရီး
ပေါ်တူဂီတောင်ပိုင်းတွင်အလည်အပတ်သွားရန် Algarve မြို့များ